K: Ph.D ( Myarmar)
Ph.D ( Myarmar)
မြန်မာ ပြည် မှာ ကွယ်..ပီအိပ်ခ်ျဒီ က များ
ရန်ကုန် နည်းပညာ ကောလိပ် တခု က.. မိတ် ဆွေ တယောက် နဲ့ စကား ပြောဖြစ်တယ်။ သူတို့အားလုံး စိတ် ညစ် နေကြ သည် တဲ့။ ရုတ် တရက် ချက် ခြင်း ဆိုသလို.. မိုးရေ တက် ရေ တဖွေး ဖွေး နဲ့ ကွင်းကျယ် အဝေး ဝေး က.. ကောလိပ် ကျောင်း ကြီး တချို့..မှာ..လှုပ် လှုပ် ရှားရှား ..အပြောင်းအလဲ တွေ ဖြစ် နေ တယ်တဲ့။ ကြီး မား တဲ့ .. အဆင့်မှီ..ဘောလုံးကွင်း ကြီး တွေ..အားကစားကွင်း ကြီး တွေ ..အသဲအသန် ပြင်ဆင် ဖောက်လုပ် နေရ တယ်တဲ့။ ဌါန မှူး တွေ အားလုံး ..ဒေါက် တာ ဖြစ် မှ ရ မယ် ဆိုလို့..လက်ရှိ တာဝန် ထမ်းဆောင် နေ ကြတဲ့..ဌါန မှူး တွေ.. လုပ်သက် ဘယ်လောက် ရှိ ရှိ.. ဒေါက် မတင် နိုင် ရင်..ဖယ်ပေး ရ တယ်တဲ့။ သင် ရိုး ညွှန်း တမ်း တွေ လည်း.. စင်ကာပူ နန်ယန် ယူနီ နဲ့ ညီ ရမယ် ဆိုလို့.. နေ့ချင်း ည ချင်း ပြီး အောင် ပြင်ဆင် နေ ကြ သတဲ့။ နောက် ဆုံး တော့..မြန်မာ ပညာ ရှိများ ပီပီ.... အထူ အပါး ညှိ လိုက်တာ..ညီ သွား တယ်တဲ့။
ကျေနပ် နေသော ..ပီအိပ်ခ်ျ ဒီ များ
၂၀၀၀ ခုနှစ် လောက်က.. ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ထဲ.. သူငယ် ချင်း ဆီ သွား လည် ရင်း... အင်းလျား မှာ တုန်းက..ဟောလ် ကျူတာ လုပ်တဲ့ ဆိုက်ကို က..ဆရာမ တယောက် နဲ့တွေ့လို့ရပ် နှုတ် ဆက် ဖြစ် သည်။ အဆောင်မှာ တည်း က.. သိပ်ချစ် စရာမကောင်း.. ခပ်ပုပု ခပ်ကြွား ကြွား.. ဒင်နာ ဆို ..မယ်လုပ် တတ်သော ဆရာ မ တယောက်။
`ဟယ်..အမ.. မတွေ့တာကြာ ပြီ။ အဆောင်မှာ ပဲလား...´ ဆိုတော့.. ` အေး..မမ .. ပီအိတ်ခ်ျ ဒီ ဆက်တက် နေ လို့.. သွားလိုက် အုံးမယ် နော်..´ တဲ့။ ဆိုင်လား..မဆိုင်လား တော့ မသိ။ ဂုဏ်ယူ ၀င့်ကြွား မူ တွေအပြည့်နဲ့ လှုပ်လီ လှုပ်လဲ့ ဆက် လျှောက်သွား သည်။
မပျော်ရွှင် သော ..ပီအိတ်ခ်ျ ဒီ များ
အ မ လုပ်သူ ရဲ့ အခင် ဆုံး သူငယ်ချင်း မို့...ကိုယ့် အမ လိုပဲ..ခင် မင် ရင်း..အတွင်း သိ အစင်း သိ။ သူ သိပ် တော် သည်။ သူ့ဘာသာ ရပ် မှာ..စ၀င်ကတည်း က.. ခုံနံပတ် (၁).. ။ ကျောင်းပိတ် ရက် တွေ မှာ တောင်..သူ့နယ် ကို မပြန် သူ့ဌါ န အတွက်.. ဆရာ တွေ ခိုင်း သမျှ.. အလုပ် တွေကို.. ဓါတ်ခွဲ ခန်း ထဲ က..မထွက်တန်း.. လုပ် ပေး ရင်း..ပညာ ယူ တတ် သူ။ သိပ်ရိုး ကာ..အားနာ တတ်သူ မို့ ရည်းစား သနာ လဲ မရှာ နိုင် ခဲ့။ မာစတာ ပီး တော့လည်း..ထိပ် ဆုံး က..။ လှည်း တန်း အပြင် ဆောင် လေးမှာ နေရင်း... အိမ်က ထောက် သမျှ နှင့်..တက္ကသိုလ် ဆရာမ ဆက်လုပ် သည်။ ရေမြေ ခြား က.. ပို မိုပြည့်စုံနိုင် မဲ့ ပညာတွေ ..သင် ဖို့ သူ ခြေ ဆန့်ခြင် သည်။ အဆင့်လည်း မှီသည်။ ၀င်ခွင့် လည်း ရသည်။ သို့သော်..သူပြန်လာ မည် ပြောသော် လည်း.. ပါမောက္ခ က..ထောက်ခံစာ မပေး။ ပြည် တွင်း မှာ ပဲ..ပီအိတ်ခ်ျ ဒီ တတ် ရ မည် တဲ့။ သူ ငြင်း ဆန်ကာ..ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ ဆက် နေ သည်။ ပီအိပ်ခ်ျ ဒီ မလုပ် ရင်..နယ် ကိုပြောင်းရမယ် တဲ့။ ကဲ..ဘာတတ်နိုင်မလဲ...လုပ်လိုက်ဟ...ပီအိပ်ခ်ျဒီ။
ရေမလျှော်ရသေး သော..အသစ်ကျပ်ချွတ် ပီအိပ်ခ်ျ ဒီများ
အမ လုပ် သူ က.ငြီး ငြူ ရင်း..ရဲပွဲ ဖွဲ့ ဘူးသည်။ ရန်ကုန်မြို့က..နံမယ် ကြီး အစိုး ရ ကျောင်းတခု မှာ တတ် နေသော..သုံးတန်း အရွယ် သူ့သား မှာ..ကျနော် တို့ကျောင်း အကြောင်း စာ ကျက် ရတာ..တော် တော် ခက်ခဲ ပင်ပန်း နေသည်တဲ့။ ` ကျ နော် တို့ ကျောင်း၏ ..ကျောင်းအုပ် ဆရာ မကြီး သည်.. ဒေါက်တာ ...ဒေါက်တာ..xxxxxxxxxxx ဖြစ် ပါသည်´ လို့ ခုမှ ပြောင်း ကျ က် မှတ် နေ ရသည် တဲ့။ ရှည်လျားတဲ့ ခောတ်ပေါ် နံ မယ် ကြောင့်..လူငယ် တွေလား လို့..မေး တော့..`အေးပေါ့.. ခုမှ ဘယ်က ..ကျောင်းပြီး ပီး ရောက် လာ ကြ သလဲ မသိ ဘူး ..´တဲ့။ ခု..ရန်ကုန် မြို့က..အထင်ကရ..အထက် တန်း ကျောင်းကြီး တွေက..ဘီအီးဒီ ဆင်း..၀ါရင့် ကျောင်းအုပ် ဆရာ မကြီး တွေ..တယောက်မှ..မရှိတော့ဘူး ဆိုပဲ။
ဘာမှန်း မသိ သော ..ပီအိပ်ခ်ျဒီများ
ဘယ်တုန်း က..ဘာလုပ် လိုက် လို့..ဘာဖြစ် သွား မှန်း မသိ တဲ့..ပီအိပ်ခ်ျ ဒီ တွေ လည်း မြင် နေရသည်။ နံမယ်ကြီး..ကဗျာဆရာ ကြီး တွေလည်း..ဘာမှန်းမသိသော..ဒေါက်တာ ကြီး နှင့်..ပျော်ပျော်ကြီး..စာအုပ် တွေ ထွက် နေသည်။ သူဌေး ကြီး တွေလည်း.. ဂုဏ် ထူးဆောင် ပီအိပ်ခ်ျ ဒီ တဲ့။ ဟိုး..မင်္ဂလာဆောင် တခု မှာ တွေ့လိုက်တာဆို... သတို့သမီးမှာ.. မာစတာ တွေရော..ပီအိပ်ခ်ျဒီ တွေ ရော..ပြည့်လို့။ အဲဒါကြောင့် ထင်တယ်..ညွှန်ကြားရေးမှူး ဆိုလား..ဘာလား.။
ပီအိပ်ခ်ျ ဒီ နဲ့..ဂျီဒီပီ နဲ့ ဘာတော်ပါလိမ့်။ အင်..ဟုတ်ပါဘူး..ဘာဆိုင်လို့လဲ...
ဟုတ်ပဗျာ၊ ဘာမှ Facilities မရှိဘဲ PhD တွေက ဗုံးဘောလအော။ ဒါလည်း ပညာရေးကို ဖျက်ဆီးခြင်းတမျိုးပဲ။
တင်တဲ့ဘွဲ့ယူကျမ်းတွေကလည်း Sensitive Issue တွေ ရှောင်ရတော့ တစ်ခါလာလည်း ဟိုဟာ ဒီဟာသမိုင်း၊ တစ်ခါလာလည်း ဟိုနားတ၀ိုက်က အပင်များအကြောင်း၊ ဒီနားတ၀ိုက်က အကောင်များအကြောင်း၊ ဘယ်မြို့နယ်က အထည်အဆင်များအကြောင်း၊ ဘယ်လမ်းကြီးဖောက်လို့ ကုန်သွယ်ရေး ဂွတ်သွားတဲ့အကြောင်း ဒါတွေပဲ။
အစ်မကေသွယ် ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး ကျနော့်အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခု ပို့စ်ထပ်ရေးပါဦးမယ်။
မကေ.. PHD အကြောင်းဖတ်ရင်းက ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းတွေလည်း PHD ဆက်တက်နေလို့ သူတို့ ခံစားရတာလေးတွေကို သတိရမိတယ်.. သူတို့ဆိုရင် အလုပ်လည်း လုပ်ချင်တယ်.. PHD ကို တက်ထားပြီး ဘယ်မှာ အလုပ်လုပ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတာလည်း ရှိတယ်။ PHD သင်တန်းကို ဆက်ပြီး တက်ရခက်၊ မတက်ရခက်ပေါ့။ အချိန်တွေ ရင်းခဲ့ရတာက ပိုနှမြောဖို့ကောင်းတယ်။ လွှတ်ပစ်ရမှာလည်း အဆီတ၀င်းဝင်း စားရင်လည်း သဲတရှပ်ရှပ်ဆိုသလိုပေါ့.. အချို့က တက္ကသိုလ်မှာ ဆရာမ၀င်လုပ်တော့ PHD တက်ရတာ ပြဿနာ မဟုတ်ပေမယ့် တချို့သူငယ်ချင်းတွေက ဆရာမလျှောက်တာ ရှေ့မှာ senior တွေ ပုံနေလို့ ခုထိကို ဆရာမ မဖြစ်သေးတာတွေလည်းရှိတယ်။ ကိုယ့်နောက်က ခပ်ကြီးကြီးသားသမီးတွေရဲ့ junior လေးတွေက ဆရာမတွေ ဘာတွေ ဖြစ်သွားတော့လည်း ရင်နာရတာပေါ့... နောက်ပြီး တချို့ ကွန်ပျူတာက ဆရာမတွေဆိုရင် အကုန် PHD ပေးတက်တယ်.. နောက်မှ bond ၁၀ နှစ် စာချုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတော့ အတော်များများ နှောင်ဖွဲ့မခံချင်ကြတာနဲ့ပဲ PHD တက်နေရင်းက ထွက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်.. အကြောင်းအမျိုးမျိုးပါပဲ မကေရယ်..
Academic freedom is an absolute necessity in social science studies.
But do we need that ingredient to raise our Science and Technology capabilities? For B.Tech and M.Tech via teaching perhaps we dont need those but for PhD and Master level research programs we surely need it.Because PhD research has to be novel, innovative, be involved with critical thinking skills. All those can be nutured only through classrooms with academic freedom.
If junta loves the country, they should practise some degree of academic freedom.
You cannot expect people to be competent drivers of the economy, administration, military who knows when to pull brakes when something is fishy and dodgy without previously let them immersed and learned in an academically stimulating environment with good degree of academic freedom. Or someone will take over and seize the stewardship.
အမရေ ... ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းတက်တော့ ၄ နှစ်ဗျ .. အပျော်လွန်တော့ကျရော ... ဆပ်ပလီလုံးဝ မရှိပါဘူး .. ရှေ့နှစ်တွေကရှိတယ် ကျွန်တော်တို့နှစ်မရှိတာ .. နောက်နှစ်ကျ ဆပ်ပလီပြန်ရှိတယ် ... စာသင်တာကိုမပြောသေးဘူးနော် ... နောက်ဝန်ကြီးတက်လာတော့ ပညာသင်နှစ်ကို သုံးနှစ်ပြောင်းပလိုက်တယ် ဂုဏ်ထူးတန်းကိုဖွင့်မယ်ပေါ့ ဂုဏ်ထူးတန်းပါရင် လေးနှစ် ... အဲ့ဂုဏ်ထူးတန်းတွေ သင်ရတာက ကျွန်တေ်ာတို့ ရိုးရိုးအရင်လေးနှစ်သမားတွေ သင်ခဲ့တာ သုံးနှစ်သမားတွေကိုက လေးနှစ်ကို နဲနဲခြုံ့လိုက်တာ .. ဟဲဟဲ မိုက်တယ်နော် .. ကျောင်းမှာ သမိုင်းသင်တော့ ဆရာမက စာရွက်ကိုင်ပီးစင်ပေါ်က ဖတ်တယ် ... မြန်မာလိုရှင်းပြတယ် .. အောက်က မသိတဲ့စာလုံးတွေ ဝေါဟာရတွေကို လိုက်မှတ်တယ် .. စာမေးပွဲရောက်ရင် ဒါတွေ ဒါတွေကြည့်ထား ပြီးပီ ... ထိုကဲ့သို့လွယ်သောစာမေးပွဲများကို ကျသူလည်းရှိပါသည်း)
နောက် ၀န်ကြီးတစ်ယောက်တက်လာရင် နောက်တစ်မျိုးပြောင်းဦးမလားဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး ... သင်ရိုးလား မပူပါနဲ့ ဌာနမှူးတွေ ပါမောက္ခတွေ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေဖတ်ပြီး ဘာသာပြန်သင်လိမ့်မယ် .. ခု MAဖွင့်မယ်လို့ ပြောသံကြားတယ်း)